नेपाली खेल क्षेत्रमा कोरोना संक्रमणको अवस्था यस्तो ! – Dullu Khabar
नेपाली खेल क्षेत्रमा कोरोना संक्रमणको अवस्था यस्तो !
१७ भाद्र २०७७, बुधबार १०:२३
हाल कोरोनाले गर्दा खेल क्षेत्रका केहीलाई असर पारिसकेको छ । नेपाली राष्ट्रिय स्‍क्‍वास टोलीका मुख्य प्रशिक्षक हीरा थापा भर्खरै मात्र संक्रमणमुक्त भए । उनी विगत २४ दिन देखि सेल्फ आइसोलेसनमा थिए । मंगलबार थापाले आफू कोरोना मुक्त भएको सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी गराए ।
थापाले कोरोना सोचे जस्तो भयानक नभएकाले सावधानी अपनाउँदा यसबाट सहजै जोगिन सकिने बताए । “कोरोना भाइरस सोचेजस्तो भयानक होइन । सावधानीका उपाय अपनाउँदा जोगिन सकिन्छ । संक्रमण भएकाहरू पनि नडराई सामना गर्दा र सुरक्षाका उपाय अपनाउँदा यसबाट संक्रमणमुक्त हुन सकिन्छ,” थापाले भनेका छन् ।
त्यस्तै ओलम्पियन जितबहादुर केसीलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ । पेटमा समस्या देखिएपछि अस्पताल पुगेका केसीको पीसीआर परीक्षणपछि कोरोना पोजेटिभ रिपोर्ट आएको थियो ।
पेट दुख्‍ने र दिसामा रगत देखिन थालेपछि उनी उपचारका लागि बयोधा अस्पताल पुगेका थिए । तर, उपचारअघि पीसीआर रिपोर्ट मागेपछि उनले आइतबार कोरोना परीक्षण गराएका थिए । उनी अहिले सेल्फ आइसोलेसनमा छन् ।
गत महिना अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले गरेको कोरोना परीक्षणमा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा रहेका एरिक विष्टलाई पनि कोरोना परीक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजेटिभ आयो । कोरोनाका कारण १९ दिनअघि सेल्फ आइसोलेसनमा बसेका एरिक विष्ट अहिले निको भएका छन् ।
एरिकले फेसबुकमार्फत आफू पूर्ण निको भएको जनाएका छन् । उनले कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको सुरुवाती समयमा डर लागे पनि यो सामान्य रहेको बताए ।
“कोरोना संक्रमण भएपछि हाम्रो समाजले अर्कै व्यवहार गर्ने रहेछ । यो मेरो जीवनको एउटा नमीठो यादको रुपमा रहनेछ । हाल म ठीक छु । कोरोना लागेको व्यक्तिलाई सबैको साथ र सहयोगको खाचो पर्छ । मैले आज एक युद्ध जितेको छु । राष्ट्रिय टोलीमा पर्ने र देशका लागि खेल्ने सपना म साकार बनाउनेछु,” एरिकले लेखेका छन् ।
एरिक ‘ए’ डिभिजन लिग क्लब न्युरोड टिम एन आरटीका खेलाडी हुन् । उनी लिगपछि विश्वकप छनोटअन्तर्गत रहेको ३५ जनाको टोलीमा परेका थिए । विश्वकप छनोटको तयारीका लागि प्रशिक्षणमा रहेको बखत नै एन्फाले सबै खेलाडीको कोरोना परीक्षण गराएको थियो ।
“कोरोना लाग्दैमा डराउनु पर्दैन । विशेषगरी म कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरूलाई कोरोनादेखि नडराउन अनुरोध गर्छु । यो एउटा रोग हो हामीले आफैंमा हौसला जगाएर जित्‍न सक्छौं,” एरिकले लेखेका छन् । नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमित खेलाडीको संख्या ४० पुगेको छ । जसमा ३९ जना एपीएफका खेलाडी छन् भने एकजना फुटबलर छन् । प्रशिक्षक र खेलकर्मी गरेर दुईजना अन्य व्यक्तिलाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ । जसमा एकजना प्रशिक्षक र एकजना खेलाडी निको भइसकेका छन् ।
यता एपीएफका पनि चार खेलाडीबाहेक सबै जना निको भइसकेको अवस्था छ । तराई क्षेत्रमा सीमा सुरक्षाका लागि खटिएका एपीएफका खेलाडीहरूमा कोरोना देखिएको थियो । जसमा चारजना भलिबल र तीनजना फुटबल खेलाडी पनि थिए ।
“कोरोना संक्रमित ३९ खेलाडीमा चारजना खेलाडी निको कुना बाँकी छ । निको भएका खेलाडी पनि हाल सेल्फ आइसोलेसनमा छन् । उनीहरूको अवस्था सामान्य छ । बाँकी रहेका चारजना खेलाडीको पनि रिपोर्ट आज बेलुकासम्म आउनेछ,” एपीएफका एक अधिकारीले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भने ।